“………………. အလှူရေစက် လက်နဲ.မကွာ၊စေတနာကြွယ်။
ကျွန်မနဲ.ခင်တဲ. ဂျပန်သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူ.နံမည်က မာ့ကိ ပါ။ မာ့ကိစံက သူတက္ကသိုလ်တက်ချိန်မှာ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်နဲ. သူငယ်ချင်းဖြစ်ရာကနေ သူတို.တက္ကသိုလ်က သူငယ်ချင်းတွေထဲက မြန်မာပြည်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ. သူတွေစုပြီး ကူညီတဲ. အန်ဂျီအို NGOအဖွဲ. ကလေးတစ်ခု ဖွဲ.ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးတွေကို ပညာရေး၊အပြင် ဒေသတွင်း လိုအပ်ချက်တွေအတွက် အလှူငွေပေးတာတို. အကူအညီ ပေးတာ တွေ.ဆုံပွဲတွေလုပ်တာတို.ကို တနှစ်တစ်ခါလုပ်ပါတယ်။ သူတို.သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး မြန်မာလို အစားအသောက်ချက်စားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ မြန်မာလူမျိုး တစ်ယောက်ကိုအချက်အပြုတ်နည်းပြအဖြစ် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်မကို လည်းတစ်ခါဖိတ်လို. သွားခဲ.ပါတယ်။ ကျွန်မက ကျောင်းပြီးလို. အလုပ်ဝင်ထားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ လက်ရှိကွန်ပျူတာနဲ.ပတ်သက်တာကိုသင်ယူနေတဲ.ဌေးဌေး လို.ခေါ်တဲ.တတိယနှစ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးချက်ပြုတ်စားသောက်ပြီးတဲ. အချိန်မှာ မာ့ကိတို. ဂျပန်လူမျိုးတွေအားလုံးနဲ. စကားစမြီ ပြောကြပါတယ်။ အဓိက ကတော့ ကျွန်မတို. ဒီဂျပန်ကို ဘာကြောင့်လာသလဲ၊ ဒီနေ. အချိန်အထိ ဘယ်လိုရုန်းကန်ခဲ.သလဲ၊ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးတွေရှိသလဲ ဆိုတာကို အမေးခံရပါတယ်။ သူတို.တွေက မြန်မာပြည်ကို နှစ်တိုင်းလိုလို သွားပြီး။ လှူဒါန်းနေသလို မြန်မာလူမျိုးအသိမိတ်ဆွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ သူတို.စိတ်ထဲမှာသိချင်တာက မြန်မာလူမျိုး တွေက ဘာကြောင့် နိုင်ငံခြားကိုထွက်ချင်ကြတာလဲဆိုတာပါ။ သူတို. အဖွဲ.တွေက သွားတဲ.နေရာတွေက တကယ်ကိုဆင်းရဲပြီး ပညာရေးအခြေနေနဲ.ချို.တဲ.တဲ. ပတ်ဝန်းကျင်က ကလေးတွေနဲ. မြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို. အခုသိနေတဲ. ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ. မြန်မာလူမျိုးတွေက အဲဒီလောက်ဒုက္ခရောက်ပြီး ချို.တဲ. တဲ. နေရာက လာတဲ.သူတွေမဟုတ်တော့သူတို.စိတ်ထဲမှာ ကျွန်မတို.နဲ. ပတ်သက်ပြီး သိချင်တာတွေ များတာမဆန်းပါဘူး။ (ဂျပန်မှာလည်း အလုပ်လက်မဲ. နဲ. နေစရာ၊စားစရာမရှိတဲ. ဂျပန်လူမျိုးတွေအများကြီးရှိသလို၊ အမေရိကကို သွားရောက်၊ ကျောင်းတက်၊ အလုပ်လုပ်တာ တွေလည်းမနည်းပါဘူး၊ သို.သော်လည်း ဒါတွေက တပိုင်းပေါ.)အခုလို ဂျပန်မှာ လာရောက်ပြီး ရုန်းကန်ကြိုးစားပိုက်ဆံရှာနေတာနဲ. တိုင်းပြည်အတွက် မိမိယုံကြည်ရာရှုထောင့်ကနေ လှုပ်ရှားနေတာတွေက အများကြီးပဲရှိပြီးတော့ သူတို.လိုမြန်မာပြည်ကို သွားလိုက် လှူဒါန်းလိုက် ကလေးတွေနဲ. တွေ.ဆုံပွဲတွေ လုပ်လိုက်ဆိုတာမျိူးကို မြန်မာလူငယ်တွေ က မလုပ်ကြတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာပါ။ နောက်တစ်ခုက မြန်မာပြည်ထဲမှာလည်း နေထိုင်စီးပွါးရှာနိုင်ရဲ.သားနဲ.များ ဆိုပြီး တွေးကြပါတယ် တဲ.။
(၁)ကျွန်မတို. ဂျပန်နိုင်ငံက ပညာကို သင်ယူချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျွန်မတို. နိုင်ငံထက်တိုးတက်နေတဲ.နိုင်ငံရဲ. ပညာရေးကို ကျွန်မတို.သိချင်လို.ပါ။ နောက်တစ်ချက်က အခြား နိုင်ငံခြားသား တွေနဲ.ကော ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ. အတူရင်ဘောင်တန်းပြီး သင်ယူတဲ. အချိန်မှာ ကိုယ်တိုင်ဘယ်လောက်အရည်အချင်းရှိလဲဆိုတာကိုသိဘို.နဲ. ကျွန်မတို.ကို ကြည့်ပြီး မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကို တိုင်းပြည်နဲ.လူမျိုးရဲ.ကိုယ်စားအဖြစ် မိမိကိုယ်မိမိခံယူချက်နဲ. ကြိုးစားချင်လို.ပါ။
(တကယ်က အခြားကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကနေ ဂျပန်ကိုကျောင်းလာတက်ကြတာအများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို. မြန်မာလူမျိုးတွေကျတော့ ဘယ်လိုလည်းဆိုတာသိချင်ကြတယ်။ ကျွန်မကလည်း အာဖရိကတို.၊ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားလိုနိုင်ငံမျိုးတွေထဲက ကိုယ့်နိုင်ငံကိုရွေးပြီး လှူတန်းကူညီနေတဲ.အဖွဲ.ဆိုတော့လည်း ပြောပြရတော့တာပေါ့နော်။)
(၂) ကျွန်မလည်း အခုအလုပ်လုပ်လို.ရလာတဲ. ပိုက်ဆံနဲ. မြန်မာလူမျိုးတွေကို အများကြီး အထောက်အပံ့ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းပြီးပြီးချင်းမှာ ကျွန်မကိုကျောင်းစားရိတ် ထုတ်ပေးတဲ. စပွန်စာကို အလုပ်ရရခြင်း ပိုက်ဆံစုပြီး အကြွေးတွေဆပ်ခဲ.ပါတယ်။ နောက် ယောက်ျားယူ ခလေးမွေးပြီး အခုလောလောဆယ်မှာတေ့ာ ရန်ကုန်က မိသားစုကို လစဉ်ငွေပို.ပါတယ်။ ဂျပန်ကရတဲ.လခကနေ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရက ချမှတ်တဲ့အခွန်ငွေမှန်သမျှကို အပြည့်အ၀ထမ်းဆောင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ.ငွေနဲ. စားသောက်နေထိုင်ပြီး တစ်ချို.ကိုတော့ စုပါတယ်။ ကျွန်မတို.က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသား အဖြစ်နေထိုင်တဲ. အတွက်နောင်ရေးစိတ်မအေးရလို.တတ်နိုင်သမျှငွေစုချင်ပါတယ်။ စိတ်ထဲကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင်မြန်မာတစ်ပြည်လုံးကို ကယ်တင်ချင်ပါတယ်။အဲလောက်ပမာဏကို မတတ်နိုင်သေး ပေမယ့် လစဉ် ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာသံရုံးကို ယန်းတစ်သောင်း (မြန်မာငွေနဲ့. ဆိုရင် ကျပ်တစ်သိန်းကျော်) အခွန်ငွေပေးဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ် ကျွန်မရဲ. မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးက ကျွန်မတို.ဆီက ရတဲ. အခွန်ငွေကို (ဂျပန်အစိုးရက အခွန်ထမ်းဆောင်သူတွေကို ပြန်လည်ထားရှိတဲ.နိုင်ငံသားများ အတွက် ဖြည့်ဆည်းမှု ၊ PublicServiceလောက် မဟုတ်တောင်) မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်အကျိုးရှိစွာ အသုံးချမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေသန်းပေါင်းများစွာထဲက လူနည်းစုလောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကျွန်မ လစဉ်ထောက်ပံ့ နိုင်တာ ကို အရမ်းကျေနပ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင်။
(မြန်မာနိုင်ငံကနေ ငွေကြေးများစွာရင်းပြီး ထွက်လာခဲ.ကြတယ်။ ဘယ်အရာနဲ.မှ အစားထိုးမရနိုင်တဲ့ မိသားစု၊ဆွေမျိုး၊သူငယ်ချင်း၊ ဇာတိမြေ၊ဘာသာစကား၊ အစားအသောက် အားလုံး၊အားလုံးနဲ.ဝေးနေပေမယ့် သတိရတမ်းတ နေပေမယ်.၊တစ်မြေခြား မှာ စိတ်ဖိစီးမှု တွေအောက်က အလုပ်ကြိုးစားပြီး ပိုက်ဆံရှာကြတဲ. မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ပြီး ရောက်ရှိတဲ. နိုင်ငံအသီးသီးမှာ မြန်မာသံရုံးသို. အခွန်ငွေလစဉ်မှန်မှန်ပေးဆောင်သူများ၏ ကုသိုလ်ကို သာဓုခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ. အလှူကို လည်း အမျှပေးဝေလိုက်ပါတယ်)
“ချစ်ညီမလေး အချွေ” ၊ ဗီယက်နမ်မှာ တစ်လဘယ်လောက်လှူနေလဲ?
ဆောင်းပါးတွင် ဦးဝင်းဦး၏ “မြန်.မာ့ရှုခင်းမြန်မာ့စိတ်ရင်း” သီချင်းမှ စာသားအချို.ကို အသုံးပြုထားပါသည်။ အသုံးပြုထားသောဓါတ်ပုံမှာ အီး-မေးလ်စာဝေခြင်းဖြင့်ရလာသောဓါတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Wednesday, September 09, 2009
ချစ်မကြီးရေ မီးကတော့ ၁လကို VET မှာ ၇၀ဒေါ်လာ လှူမှာပါ..တနှစ်စာ ပေါင်းလှူမှာပါ...